China Solid izinkuni sideboard isitoreji esilula iKhabhinethi ngomnyango owodwa namadilowa amane # 0105 Ukukhiqiza neFektri | Yamazonhome
Ikhabethe eliqinile lezinkuni eziseceleni kwesitoreji esilula ngomnyango owodwa namadilowa amane # 0105
Igama: Ibhodi eseceleni
Inombolo imodeli: Amac-0105
Usayizi: 900mm * 400mm * 800mm
Uzimele we-Centennial Oak
Izinto eziyinhloko yi-oak emhlophe ebangeni le-FAS engeniswe evela eNyakatho Melika. Izinkuni zinzima, ngokuthungwa okucacile nokubenyezela okuhle. Ngemuva kokucubungula ngokucophelela, izici zokhuni uqobo zigcinwa kakhulu, okuyisipho esinikezwa ngemvelo. Amaphethini amahle amise okwezintaba ahlelwe ngobunono, Iphaneli langaphakathi ledilowa lenziwe ngokhuni lwepaulownia ngobulukhuni obuphezulu, obuqinile futhi obuqinile.
Umnyango owodwa ikhabethe lokulala lamakhabethe amane
Amadilowa aklanywe ngosayizi ongalingani, agcwele ubuciko obungajwayelekile, futhi angahlangabezana nezidingo zesikhala sokugcina ezahlukene. Ukuphakama kwekhabinethi kulungisiwe ngemuva kwezilingo eziningi, futhi kuzosiza kakhulu noma uhlala onqenqemeni lombhede ukukhetha izingubo. Kukusiza ukuhlela ezinye izinguquko ezivamile Umsebenzi wokusetshenziswa, idilowa elivaliwe lingakunika isikhala esizimele esanele.
Isitimela esiqinile sesilayidi sesilayidi + senqubo yenhlanganyelo
Amadilowa wokhuni oluqinile aqinile kakhulu. Ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kokusetshenziswa, senze imingcele yokuvimbela ukukhipha idrowa ngalinye, ngakho-ke asikho isidingo sokukhathazeka ngezingozi zokuphepha zokudonsa okhokho. Imigqa elula futhi ebushelelezi, idizayini yesayizi elungile, Ingasekela isitayela esiyisisekelo sendawo yokuhlala.
Imilenze eyodwa yokhuni oluqinile yokhuni
Imilenze eqinile yokhuni oluqinile kanye nokwakheka okungagudluki nokugqokwa ngaphansi kungavikela phansi kangcono futhi kwandise impilo yokusebenza kwekhabethe. Ngezansi ayithinti inhlabathi ukugwema umswakama futhi kulula kuwe ukuthi uyihlanze futhi uyinakekele. Isakhiwo somlenze owodwa, ukufika okuzinzile nokubamba okuqinile.
Ikhwalithi ephezulu yomnyango wezingxenyekazi zekhompiyutha + umnyango wekhabethe lengilazi
Umnyango wekhabethe lengilazi osobala uhambelana nokugcina nokukhombisa. Amabhodlela ambalwa ewayini elimnandi kanye nezicucu ezimbalwa zobuciko zifakwa ngaphakathi, okuhle nokupha. Umphimbo ongemuva ufakiwe ukuhlunga umoya ngaphakathi, ukufakazela umswakama nokungahambisani nesithukuthezi. Izindwangu zeminyango esezingeni eliphezulu, Kulula ukuvula, awukho umsindo, akulula ukugqwala.
Indawo enkulu yokugcina ekhabetheni
Isibambo esiqinile esinezimbobo sihlanganiswe nendawo yokudweba, ukuslayida nokudonsa kuyisimungulu, konga isikhala, nokugcina ukubukeka kulula. Kuhlonyiswe ngedivayisi yokubeka ukuphepha esifubeni samadilowa ukuvikela ukulahlwa kwekhabethe ngengozi, ukuvikela impilo yamalungu omndeni, ukuphepha kwezingane nabazali ngokukhululeka.
Langaphambilini I-One Door Four Drawer Side Cabinet IKhabhinethi Yesitoreji Esilula Sofa Eceleni # 0104
Olandelayo: ITaekwondo Training Air Mattress Inflatable Air Tumble Amaculo 0381
ISup Surfboard Brushed Stand up Paddle Board 0370
Nordic okuqinile izinkuni etafuleni lokudlela ubisi itiye esitolo kabusha ...
Zonke Izindwangu Eziqinile Zesifuba Sokuhlala ...
Nordic Single Solid Izinkuni Uzimele Sofa Creative Fu ...
Household Desk Simple Computer Desk Inhlanganisela ...